1 Korintianina 16 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
1 Korintianina 16:1-24
16 Mikasika ilay famoriam-bola+ ho an’ny olona masina,+ dia aoka koa ianareo hanao araka izay nandidiako an’ireo fiangonana any Galatia.+ 2 Isaky ny andro voalohany amin’ny herinandro, dia aoka ny tsirairay aminareo, any an-tokantranony any, mba hanokana vola, arakaraka izay azony. Amin’izay, rehefa tonga aho, dia tsy hisy famoriam-bola hatao intsony. 3 Fa rehefa tonga any aho, dia izay olona ekenareo an-taratasy+ no hirahiko hitondra ny fanomezanareo ho any Jerosalema. 4 Raha mety koa anefa ny handehanako any, dia hiaraka amiko izy ireo. 5 Fa ho tonga any aminareo aho rehefa avy mandalo an’i Makedonia, fa efa handalo an’i Makedonia+ aho izao. 6 Ary angamba hijanona kelikely any aminareo aho na handany ny ririnina any mihitsy aza, mba hanateranareo+ ahy lavidavitra amin’izay halehako. 7 Fa tsy amin’izao fandalovako izao no tiako hahitana anareo, fa manantena ny hijanona elaela any aminareo+ aho, raha avelan’i+ Jehovah.+ 8 Hijanona eto Efesosy+ anefa aho mandra-pahatongan’ny fetin’ny Pentekosta, 9 fa misy varavarana lehibe nosokafana ho ahy, dia varavarana misokatra ho amin’ny asa.+ Maro anefa ny mpanohitra. 10 Raha tonga any anefa i Timoty,+ dia tandremo mba tsy hatahotra izy eo aminareo, fa manao ny asan’i Jehovah izy,+ tahaka ahy koa. 11 Koa aoka tsy hisy hanao tsinontsinona+ azy. Atero lavidavitra izy ka alefaso soa aman-tsara mba ho tonga atỳ amiko, fa miandry azy izaho sy ireo rahalahy. 12 Mikasika an’i Apolosy+ rahalahintsika, dia niangaviako mafy izy hiaraka amin’ireo rahalahy ho any aminareo, saingy tsy sitrany mihitsy aloha izao ny handeha. Fa ho tonga any ihany izy rehefa afaka. 13 Miambena hatrany,+ ary aoka ianareo ho mafy orina ao amin’ny finoana+ sy hitomban-dahy+ hatrany ary hatanjaka.+ 14 Ataovy amim-pitiavana izay rehetra ataonareo.+ 15 Izao no iangaviako anareo, ry rahalahy: Fantatrareo fa ny fianakavian’i Stefanasy no voaloham-bokatra+ tany Akaia ary nanolo-tena hikarakara ny olona masina+ izy ireo, 16 koa enga anie ianareo hanaiky foana ny olona toy ireny sy izay rehetra mifarimbona amin’ny asa sy misasatra mafy!+ 17 Faly anefa aho fa eto amiko i Stefanasy+ sy Fortonato ary Akaiko, satria manonitra ny tsy maha eto anareo izy ireo. 18 Fa mamelombelona ahy+ sy mamelombelona anareo izy ireo. Koa mba ekeo ny olona toy ireny.+ 19 Mampamangy,+ hono, ianareo, hoy ireo fiangonana atỳ Azia. Mampamangy anareo indrindra ao amin’ny Tompo, hono, i Akoila sy Priska, mbamin’ny fiangonana ao an-tranony.+ 20 Mampamangy anareo ny rahalahy rehetra. Mifampiarahabà amin’ny oroka masina.+ 21 Ity no veloma nosoratan’ny tanako, izaho Paoly.+ 22 Raha misy tsy miraiki-po amin’ny Tompo, dia aoka izy ho voaozona.+ Avia, ry Tomponay ô!+ 23 Ho aminareo anie ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’i Jesosy Tompo! 24 Ho aminareo rehetra anie ny fitiavako, ao amin’i Kristy Jesosy!
1 Korintianina 16